Vovoka phosfatate NSI-189 (1270138-41-4) - Phcoker
Ny vovo-dronono phosfat NSI-189 dia vovon-tsakafo neurogenika marobe misy fananana fitsaboana amin'ny ati-doha mety misy …….
Rojo NSI-189 vovoka Phosphate (1270138-41-4) video
Rano fisotro madio NSI-189 (1270138-41-4) Famaritana
Ny voan-dipoaly Phosphate NSI-189 dia ny mpikaroka momba ny neurogenic sy nootropic izay novolavolaina tamin'ny nicotinamide sy pyrazine. Ny fitsapana mifehy ny fifampiraharahana dia mampiseho fa manandratra ny neurogenesis na ny famokarana sela any amin'ny atidoha.
Ao amin'ny fianarana biby dia hita ihany koa ny fampitomboana ny habetsan'ny hippocampus amin'ny 20%, ka mamadika ny soritr'aretin'ny fahaketrahana. Ny fandinihana toy izany dia mampiseho fa mety ho fitsaboana mahomby ho an'ny fahaketrahana.
Ny voamaina Phosphate NSI-189 dia heverina ho fitsaboana tsara ho an'ny toe-javatra hafa, anisan'izany ny aretim-pisefoanan'ny aretina (PTSD), ny aretin'i Alzheimer sy ny olana ara-tsainan'ny taona.
Roja VHF-189 Phosphate (1270138-41-4) Specifications
Product Name Rano fisotro madio NSI-189 Phosphate
Anarana simika UNII-HX0VO60T62;HX0VO60T62;AKOS030632361;Methanone,(2-((3-methylbutyl)amino)-3-pyridinyl)(4-(phenylmethyl)-1-piperazinyl)-, phosphate (1:1)
Brand Name Rano fisotro madio NSI-189 Phosphate
molekiolan'ny Formula C22H33N4O5P
molekiolan'ny Wvalo 464.503 g / mol
Color Fotsy amin'ny fotsy
Fasoracetam Application Izy io dia ampiasaina amin'ny fitsaboana ny toe-javatra hafa, anisan'izany ny aretim-pivalanana manelingelina ny aretina (PTSD), aretina Alzheimer ary olana ara-pihetseham-po mifandraika amin'ny taona.
Raw Ny phosphate NSI-189 powder (1270138-41-4)
Ny phosphate NSI-189 powder (1270138-41-4) Ny fomba fiasa?
Ny mekanika amin'ny asan'ny NSF-189 phosphate dia mitoetra ho tsiambaratelo ara-barotra. Nolazaina fa ny NSI-189 dia mamehy ny mpitsabo glucocorticoid ao amin'ny atidoha. Ny fitambaran-tsakafo Glucocorticoid dia mety ho endrika fanoherana ratsy izay mampihena ny cortisol. Ny kortisol dia hormone mifantoka amin'ny fahaketrahana sy ny aretina hafa momba ny neuropsychiatrie hafa.
soa of Ny phosphate NSI-189 powder (1270138-41-4)
Ny NSI-189 dia fikambanana tsy mitongilana izay ampiasain'ny Neuralstem amin'izao fotoana izao mba hampiasana azy io amin'ny fitsaboana aretina marary marobe toy ny fahaketrahana sy aretin'ny neurodegenereative.
Ampitomboy ny fahalalana
Azonao atao ny manatsara ny fahaketrahana
Afaka manampy amin'ny famelezana
Afaka manampy amin'ny Diabeta
soso-kevitra Ny phosphate NSI-189 powder (1270138-41-4) Dosage
Noho ny fisian'ny dokotera NSI-189 vaksin dia mbola misy fitsaboana mivaingana. Na izany aza, nandritra ireo fisedrana ireo dia nomena dipoavatra isan'andro ny 40mg, 80mg, ary 120mg tao amin'ny dose avo indrindra isan'andro nandritra ny andro 28. Nandritra io vanim-potoana io, ny marary dia tsy nitatitra fisehoan-javatra lehibe na fihary voan'aretina, ary hita fa tsara fandeferana ny fosafon'ny NSI-189. Nisy koa ny fihenan-danjan'ny fahaketrahana sy ny fambara mahazatra ho an'ireo marary mandray ny dosage ambany amin'ny 40mg sy 80mg, saingy tsy ho an'ireo izay mandray 120mg isan'andro. Ny fitrangarohan'ireo fitsapana ireo dia manohana ny hevitra fa ny PHI NS-189 dia afaka mitondra ny MDD. Na izany aza, ny fianarana fanampiny momba ny dosage sy ny fomba fiasan'ny fôsily NSI-189 dia tsy maintsy ilaina mba hanamafisana ny fanamarihana mialoha ary hanampy amin'ny fanatsoahan-kevitra.
Side effects of Ny phosphate NSI-189 powder (1270138-41-4)
Ny voka-dratsiny dia voalaza fa boka maina, fitsaboana, aretim-bavony, fitaintainana, torimaso, reraka, tsy misy fitsaharana, tsy fahampian-torimaso, nofy ratsy / nofinofy, parathesia, lamosina, hyperthermia, mihinana, fanaintainana hoditra,